Kismaayo Daarood Iyo Hawiye Yaa Dadka Deegaanka Ah? - Aragtida: Abdi Osman | KEYDMEDIA ONLINE
Afeef: » Maqaalkan ujeedadiisu waa in wax la toosiyo oo wixii Soomaali halaagay (eex) laga koro » Inkasta oo Maqaalka lagu xusay Magacyo Qabiilada qaarkood haddana ma jirto qabiil la aflagaadeynayo ee ujeeddadu waxa weeye in qabiil walba xaqiisa la caddeeyo. » Maqaalkan qaybtiisa hore waa xisaabtan ka dhexeeye 2da beelood ee Hawiye iyo Daarood cidda Kismaayo xaqa u leh ee kama hadlayo 3da beelood ee kale ee iyaguna xaqa u leh Kismaayo.
Waxaa beryahan dhegaha Soomaalida wareeriyey arrinta maamul u sameynta Jubbooyinka taasoo ay hormuud ka ahayd beesha Daarood doodo bandanna laga qabtay, dadkii daawaday doodaha ama akhristay website-yada waxa si weyn uga muuqatay doodahaasi in beesha Daarood ay caro weyn muujineyso mar alle markii ay qabaa’ilka kale ka hadlaan Kismayo gaar ahaan beesha Hawiye oo ay marar badan ku tilmaameen beel boob iyo dhul ballaarsi wadato oo Magaalo (Kismaayo) uu Daarood leeyahay usoo hanqal taagaysa.
Ogow beesha Hawiye uma diidana inay Beesha Daarood qayb libaax Kismaayo ka helaan ama talo ku yeeshaan ee beesha Daarood ayaa beesha Hawiye u diiddan inay qayb libaax ku yeelato Kismaayo.
Maadaama hadda lakala saarayo Hawiye iyo Daarood cidda deegaanka u ah Kismaayo waxaa garsoore ah 3da beelood ee ah beesha 5aad, Digil-iyo-Mirifle iyo beesha Dir. Haddii maqaalkan waxa ku qoran ay igu raacaan 3da qabiil ee garsooraha ah (qof walbow adiga weydii 3daas beelood in waxa meesha ku qoran sax yihiin iyo in kale) waxaa soo bixi doonta in Daarood yahay hasha geela cunta ee cabaadda (isagoo gar daran uu dhib tirsansanayo), haddii ay igu khilaafaanna waxaa idiin caddaan toonta in Hawiye uu dulmi wado (dhul boob wado).
Inta la socota arrimaha jubbooyinka waxaa dhegahooda ka batay “DADKA DEEGAANKA (DAAROOD) AH HADDII AY TASHANAYAAN MAXA KA GALAY INTA KALE (YACNI SOOMALIDA KALE)”, “DOWLADDA DASTUURKA AYEY KU TUMANAYSAA” “ARRIMAHA JUBBOOYINKA MAXAA KA GALAY XAMAR (YACNI HAWIYE)” “HELLO GAARISA, HELLO JIGJIGA, HELLO GAROWE (YACNI ALL DAAROOD ISU KAALAYA)” iwm.
Waxaan arkay arrinti oo faraha ka sii baxaysa oo dowladdii iyo madaxweynihii dalka howlihii uu qaban lahaa ee ah in Soomaaliya ay dib caalamka ugu soo biirto looga mashquulinayo Kismayo, waxaan arkay siyaasiyiin PHD wata sida Dr. Cali Khalif Galaydh oo arrinta Kismayo ay kala weynaatay arrintii Khaatumo oo madaxweynaha ka eedeynayo telefishanada, waxan arkay in xiisado iyo dhiillo 20 sano ka hor dhexmaray 2da beelood ee walaalaha ah dib loo gocanayo, waxan arkay in jaaliyadihii didadda lagu kicinayo waa laydin dhacayaaye mudaaharaada, waxaa waajib noqotay marka, bal horta inta qalin iyo buug la qaato la isu deegaan (tuulo) tirsado si ay usoo baxdo cidda deegaanka ah.
1- Baarka, 2- Koban, 3-Kamsuuma, 4-Sanguuni, 5-Yoontooy, 6-Buulo Guduud,
19-Leheleey, 20-Beerxaani (degmo), 21-Geles, 22-Gumbis, 23-Dhexmar, 24-Kudhaa, 25-Istanbuul,
Cawr-Male(Gaaljecel iyo Dagoodiye ayuu la dhashay) tuulooyinkiisa waxay kala yihiin:
1-Cabdalla Biroole, 2-Buulo Xaaji iyo 3-Cusbo, dhammaan waxaa laga xukumaa Kismaayo
2- Dhasheeg Waamo, 3- Baqdaad
Ururkan SAHAL dadka ku jira qof Kismaayo ku dhashay kuma jiro ama waa ku yar yahay, waxay inta badan ka yimaadeen Killil 5 iyo Puntland, waxay maqleen dhulka jubbooyinka ayey beeshiinu dagtaa mana is weydiinin yaa la daggan, waxa hal ku dhig u ah labo erey; labadaas erey mid waxa weeye“ LABO GOBOL IYO WIXII KA BADAN HADDII AY IS RAACAAN DASTUURKA AYAA OGGOL, MADAXWEYNAHA DASTUURKA AYUU KHILAAFAYAA” waa yahaye haddii anigoo hawiye ah oo deegaan ka ah iyo qabaa’ilka kale ee iyaguna deegaanka ah aan isku darsanno JUBBADA HOOSE, JUBBADA DHEXE IYO SHABEELADA HOOSE Dastuurku muxuu ka qabaa, ma diidayaa ayey kula tahay?
Haddiise Digil iyo Mirifle iyo qabaa’ilka kale ee deegaanka ay lix gobol sameeyaan, Dastuurku ma u diidayaa? Haddiise 3 maamul goboleed oo kala duwan oo qolo walba Dastuurku u oggol yahay aan hal aag ka wada dhisno sow dagaal sokeeye oo kale ma aha?
Soomaaliyey ma garateen in SAHAL iyo inta ku fikir ahba aysan meesha waxba ku hayn? Halkudhiggode kale ee ay madaxweynaha ku duraan waxaa weeye inuu yiri “ BAYDHABO IYO BELEDWEYNE ISKU TASHADA (MAAMUL GOBOLEED) KISMAAYONA MA TASHAN KARTO!” horta aniga madaxweynaha afhayeen uma ihi oo isaga ayaa is difaacaya laakiin madaxweynaha ereyadaas sidaas uma dhihin, laakiin markii uu labadaas magaalo tegay dadkii wuxuu ku yiri heshiiya oo tashada, sababtoo ah Baydhabo waa magaalada 3aad, B/weynena waa magaalada 4aad ee ugu khilaafka iyo dagaalka badan Soomaaliya marka laga reebo Xamar iyo Kismaayo oo 1aad iyo 2aad ah, madaxweynaha kama hadleynin dowlad goboleed oo ma dhihin B/weyne iyo Jowhar ha dhisteen maamul goboleed, Baydhabo iyo Xudurna ha dhisteen maamul goboleed, ee waxay ahayd is khilaafka iyo dagaallada qabaa’ilka dhexdiinna joojiya, ladaas magaalona dhexdooda way heshiin waayeen sidaas ayey dowladda Federaalka guddoomiye gobol ugu magacawday mid walba(B/weyne iyo Baydhabo), haddii uu madaxweynuhu Kismaayo tago sidaas un buu u dhihi lahaa “war reer Kismaayow heshiiya oo tashada”, haddii marka khilaafkii reer kismaayo uu taagan yahay maxaa u diidaya in dowladda federaalku soo faro geliso oo guddoomiye gobol u magacowdo sida B/weyne iyo Baydhabo?
Tan kale madaxweynaha qabiilka hoose ee uu ka dhashay ee Abgaal hal tuulo kama dagaan Hiiraan iyo Bay midna laakiin waxay dagaan Jubbada Hoose oo tuulooyinka Turdho iyo Naftaahuur iyo aagga Jamaame ayey deggan yhiin, marka meel ay Jufadiisa hoose waxba ka dagganeyn (B/weyne iyo Baydhab) muxuu uga hiilinayaa meel ay reer kiisa deggan yahiin oo ah Jubbada Hoose? Soomaaliyey ma garateen qodobka 2aad ee ay SAHAL iyo inta ku fikirka ah ku doodaan inuu yahay hal bacaad lagu lisay?
Horey waxaan ku soo sheegay in 9-kii tuulo ee Absame 2 ka mid ah (Afmadow iyo Badhaadhe) Siyaad Barre uu degmo uga dhigay, taasina ay tahay eexdii ay dowladdii Maxamed Siyaad gashay waayo 34 tuulo oo uu hawiye ka daggan yahay Jubbada hoose sidee mid degmo u qalanta looga waayey oo 9 tuulo oo uu Daarood dego 2 degmo looga helay, ma fahamtay sheekada?
Shiikh shariif ayaa fahmay caddaalad darrada markaasuu 3 degmo oo kala ah 1-Beerxaani 2- Raaskaambooni iyo 3-Hoosingow degmooyin u magacaabay intii uusan shaqada ka tagin, hase yeeshee C/weli Gaas oo bil ka hor Bacaadweyn (Gaalkacyo) oo ay reerkiisu degaan degmo u magacaabay ayaa wuxuu ku doodayaa baarlamaanka iyo golaha wasiiradaba aysan ansixin degmooyinka uu Sh. Shariif magacaabay, waa su’aale ma kuwii siyaad barre magacaabay ayey baarlamaan iyo gole wasiirraba ansixiyeen?
Shirka maamul u sameynta Jubbooyinka ee la rabo in Kismaayo lagu dhoodhoobo waxa la yiri waxa wax lagu qaybsanayaa hab degmo taasoo degmadiiba ay qaadaneyso 27 xubnood, Absame -kaaga darane - tuuladii Xagar ahayd ayey degmo ka dhigteen iyadoo aan la ogeyn meel lagu magacaabay iyo cidda magacawday sidaasi ayey Jubbada Hoose oo kaliya ka filayaan inay ka helaan 81 xubnood oo ah 3 degmo oo min 27 xubnood ah oo waliba lagu sii daray wixii Kismaayo kaga soo aado, qiyaastii waa tiro 100 kor u dhaafaysa ogow waa 9-koodii tuulo! Majeerteen kismaayo kaliya ayuu 100 ergo ka helayaa asagoon hal tuulo ku lahayn deegaanka. Hawiye maxaa soo aadaya?
34-tiisii tuulo weli waa tuulooyin, sida ay SAHAL u leedahay Daarood ayaa majority ka ah Jubbada Hoose waxa weeye 3 degmo (Afmadow, Badhaadhe- kuwii Maxamed Siyaad iyo Xagar- Jeebkeenna) ayaa 9-kii tuulo ee daarood ka soo baxday Hawiyana hal degmo kuma laha (xataa kuwii Sh. Shariif) war bal adduunyadaan eega!
Dastuuska Soomaaliya QODOBKIISA KOOWAAD wuxu qorayaa Somaliya inay tahay QARAN MADAX BANNAAN oo taladeeda iyadu leh, haddaba qaran madax bannaan dalal kale maamul ma ka sameeyaan gudihiisa iyada uusan qaranku raalli ka ahayn ? Sow Dastuur ku tumasho ma aha? Qolyaha dhahaya Kenya iyo Itoobiya ayaa xaq u leh maamulka Jubbooyinka taladiisa inay wax ka gooyaan (Axmed Madoobe ayaa 28/02/2013 sheegay in IGADD ay shirka hal sano soo wadday!) iyo qolada diiddan sida (madaxweynaha) yaa dastuurka ku xadgudbaya? Faarax Macallin-se ma ku dhacaa inuu dhaho Liboy Kenya Nairobi lagama xukummayo? Ma Gaarisa ayaa laga soo magacaabay ragga ,Immigration-ka Liboy?
Tan kale madaxweynaha mas’uuliyad ayaa ka saran dalka in aan dib danbe loo dagaallamin oo qabaa’ilku heshiiyaan, sida gobolada la isu raacinayo sow ma aha arrin keeni karta dagaal sokeeye? Haddii uu Axmed Maddobe maamul uu hadda Kismaayo ka dhiso oo uu dhaho ciidamada Kenya way sii joogayaan oo maamulka “deegaanka” ayaa rabo oo ay dowladda Soomaaliyana amarto in ciidanka Kenya lagu beddelo ciidan kale amaba ay Soomaaliya ka baxaan sow shiddo kale ma aha? Yaa damaanad qaadaya dadkii wafdigii dowladda federaalka ah soo celiyey Kismaayo inay dhahaan Kenya way sii joogeysaa sow waxa ay Kenya doonayso ma aha? Madaxweynaha, Ra’isul wasaaraha iyo Ra’isul baarlamaanka waa inaysan arrimaas aan kor ku soo sheegay fududeysan, maadaama ay yihiin rag aqoon yahan ah (Jubbooyinka aniga aragtidayda intay KENYA joogta maamul lagama dhisi karo).